Ankadikely Ilafy : tranona jeneraly notafihan’ny jiolahy, lasa ny volabe sy basy poleta | NewsMada
Ankadikely Ilafy : tranona jeneraly notafihan’ny jiolahy, lasa ny volabe sy basy poleta
Notafihan’ny jiolahy efatra, nitondra basy… kilalao sy zava-maranitra, ny alin’ny alatsinainy teo, ny tranona jeneraly iray monina eny teny Ankadikely Ilafy. Nanohitra ihany saingy tsy nahovoka ity farany. Vokany voaroban’ireo jiolahy ny basy poletany sy ny volabe.
Volabe mitentina 1 600 000 Ar tao anaty vatamafihidy sy basy P.A revolver tsy misy bala no lasan’ny jiolahy nandritra ny fanafihana tranona jeneraly iray teny Ankadikely Ilafy, omaly maraina tamin’ny 2 ora. Araka ny loharanom-baovao voaray, jiolahy miisa efatra nitondra basy kilalao sy zava-maranitra no tompon’antoka tamin’ity fanafihana ity. Voalaza fa tsy nanao saron-tava ny telo amin’ireo jiolahy raha nanakona endrika tamin’ny lamba kosa ny iray. Niditra an-keriny tao an-tranon’ilay manamboninahitra avy hatrany ireo jiolahy. Tsy nanaiky lembenana anefa ilay jeneraly ka raikitra ny fifandonana tamin’ireo jiolahy. Vokany, naratra teo amin’ny tarehiny ilay manamboninahitra. Basy avy hatrany no notadiavin’ireo jiolahy, saingy tsy nahita ry zalahy na efa nisava hatrany anaty kidoro aza. Namoaka tsy fidiny ny basiny ihany anefa izy taorian’izay noho ny fandrahonana nataon’ireo jiolahy.
Novakin-dry zalahy koa ilay vatamafihidy mihidy gadana ka lasan’izy ireo ny volabe tao anatiny. Lasa nitsoaka avy hatrany ireo jiolahy rehefa nahazo izay notadiaviny tamin’ity tokantrano niharan’ny fanafihana ity.
Saika mbola hanafika tao amin’ilay zanak’ilay jeneraly…
Fantatra fa saika hotafihin’ireo jiolahy koa ny zanaka vavin’ilay manamboninahitra izay mifanila amin’ny tranony ihany. Tsy tafiditra anefa ry zalahy noho ny fisian’ny vy miaro ny varavarana avy any ivelany. Nanohy ny lalana nitsoahany kosa ireo jiolahy taorian’izay.
Basy kilalao nisolo basy tena izy. Hanampy isa ny fitaovam-piadiana miparitaka eny am-pelatanan’ny jiolahy indray izany ilay basy P.A lasan’ireo jiolahy ireo. Ny fanadihadiana ireo basy mahery vaika nampiasain’ny jiolahy hatramin’izay tsy mbola hita izay tena marina nefa izao miampy indray. Tsy vao izao rahateo no nisy manambonahitra eo anivon’ny mpitandro filaminana niharan’ny fanafihan-jiolahy toy izao. Tsy kely lalana ny ratsy satria manana ny paikady manokana ihany koa ry zalahy rehefa hanao fanafihana toy izao.
Mitohy, araka izany, ny fanadihadian’ny zandary mikasika ity raharaha fanafihana ity. Ny zandary avy ao amin’ny borigadin’i Sabotsy Namehana sy ny borigadin’Ankadikely Ilafy no manao ny fanarahan-dia.